Abamuru nke Iji Foto Foto 3D Dịkwuo Mmụba maka itinye aka na ahịa
Uru nke iji foto 3D iji kwalite ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ azụmahịa gị
Mmepe AI & Ihe omume 3D Aworan
Site na nmepe di uku na ulo oru AI, ndi ahia na enweta ezi nnabata site n’aka ndi oru ohuru a nke nyocha. Ọ bụ ezie na data AI a na-ebugharị nwere ike inyere aka ịbawanye itinye aka na azụmaahịa maka mgbasa ozi ngosipụta, weebụsaịtị, na post mgbasa ozi na-elekọta mmadụ, ọtụtụ ndị na-azụ ahịa emeela ihe iji hụ mgbasa ozi ndị a, na-achọ ụzọ ọhụrụ iji bulie ọnụego ntinye ọnụ ahịa ahịa. Nke a bụ ebe teknụzụ AI na-abata.
Nnukwu ọrụ ọhụụ nke teknụzụ AI bụ ikike ịgbanwe foto ọ bụla mgbe ọ bụla ka ha nwee mmekọrịta Ihe onyonyo 3D. Companieslọ ọrụ ọhụụ dịka LucidPix na-aga n’ihu n’ime ama egwuregwu ae mepụtara ọhụrụ, ebe asọmpi pere mpe na nnukwu ichepụta echiche. Imirikiti ndị na-azụ ahịa amabeghị banyere ngwa nke AI, si otú a na-enye ndị ahịa ohere iji teknụzụ ọhụụ iji dọta uche nke ndị ahịa. Mgbe ndị mmadụ nọ na-elele teknụzụ dị ọhụrụ nye ha, nke ha ahụtụbeghị mbụ, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ịchọrọ mmasị na ịchọ ịmata banyere ya. Nke a na-abanye n’ime mmụọ ebumpụta ụwa anyị, nke, mgbe anyị chọpụtara ihe, ọ bụrụ ebum n’uche anyị ịghọta ihe ahụ, wee si mee ka uche mmadụ zuru ezu na nchọpụta ahụ. N'iburu ihe ịtụnanya a n'uche, azụmahịa nwere nnukwu ohere iji meziwanye mgbasa ozi mgbasa ozi na mgbasawanye ahịa.
Ngwa azụmahịa nke 3D Foto
Iji usoro ihe osise 3D nke AI mepụtara ọhụrụ maka mmekọrịta mmadụ na ibe ya, tradigital, na mgbasa ozi ọdịnala nwere ikike nke ọma mụbaa itinye aka na ịre ahịa, rute, na ntinye nke ezigbo onyonyo nke ụlọ ọrụ nwere ike iji. Site na mmụba a dị egwu, ọ na-enye ụlọ ọrụ ohere ịnweta dollar ọzọ maka dollar ahịa ha, na-abawanye uru ha na nloghachi na itinye ego. Ndị a echekwara mmefu ma nwekwuo uru nwere ike mee ka ọtụtụ azụmaahịa ghara ịba uru na uru ịchụ ego kwa izu. Mmetụta kachasị dị ịtụnanya nwere ike ịchọta ndị ọchụnta ego pere mpe, ndị na-atụkwasị obi na Yelp na igwe mmadụ ndị ọzọ na-eme ka ndị ahịa na-azụ ahịa. Ọ bụrụ na obere ezinụlọ na-ere ebe a na-ere nri nwere ike ịnweta ndị ahịa ise ọzọ kwa ụbọchị n'ihi foto ha, ha nwere ike na-aga site na ịkụghasị ma ọ bụ ịhụ uru ahịa yana ọ nwere ike ikwe ka ha gbasaa ma na-eme nke ọma n'ahịa ha. N’inwe ọtụtụ ihe banyere nka na ụzụ, ọ bụ ihe ịtụnanya na ọ bụ mmadụ ole na ole ji ya.
Ọtụtụ mgbe, mgbe teknụzụ ọhụụ na-abịa, ndị na-ebugharị ihe mbụ ga-agbagharịrị site na usoro dị mgbagwoju anya iji mezuo ebumnuche ha, agbanyeghị nke a adịghị mkpa. Enwere ụlọ ọrụ, dịka LucidPix, nke mepụtara ngwa dị mfe nke AI nke dị mfe iji na-enweghị usoro mmụta. Ngwa dị ka nke a na-enwe ike ịmepụta ihe oyiyi 3D na naanị otu ihuenyo ahụ, na-eme onye ọ bụla ọgụgụ isi mgbe ọ na-abịa na teknụzụ AI. Nke a na - enyere ndị ọrụ novice aka inwe ike nke ngwa ahụ na obere ọzụzụ na obere mgbalị.
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-azụ ahịa ma ọ bụ onye na-ere ahịa, nke a bụ ohere gị ịbụ onye na - emegharị mbụ mgbe ọ na - ese foto 3D. Nhọrọ bụ nke gị, ma ọdịnihu doro anya. Igwe foto 3D na-agafe na AI ịnọ ebe a ga-anọrịrị ma n’enweghị mgbagha ọ ga-abawanye itinye aka na azụmaahịa yana ya. Nwere ike ịbụ onye mbugharị mbụ wee nweta uru niile nke onye ahịa ọhụrụ, ma ọ bụ chere ruo mgbe onye ọ bụla ọzọ hapụrụ gị n'ájá.
Ya mere, kedu ihe kpatara ya Budata LucidPix?
Etu ị ga-esi wepụta koodu nkwalite LucidPix gị maka iPhone na gam akporo
Echiche eserese nke oge 3D
Ebe Kasị Mma Ileta na Gris! →← Ndụmọdụ maka ịse foto obodo